Wax ka baro taariikhda Aabihii aasaasay Zaambiya, Madaxweyne Kenneth Kaunda oo geeriyooday isagoo jira 97 - Diblomaasi
Related Topics:Madaxweyne Kenneth Kaunda oo dhintay isagoo jira 97Wax ka baro taariikhda Aabihii aasaasay Zaambiya
Mararka qaarna waxay Taallada Daljirka Dahsoon martigalisaa mudaharaadyo kala duwan oo ay sameeyaan dadweyne cabanaya.
Taallada ayaa loo dhisay si loo maamuuso raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee ku dhintay difaaca Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa astaan muhiim ah oo ku taal magaalada Muqdisho. Waxay ku dhowdahay hudheelka Naaso Hablood. Bishii Luulyo 2017, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ubax dhigay tallaabooyinkiisa xuska kuwa naftooda u huray xorriyadda Soomaalida. 22 sano kaddib burburkii Soomaaliya ayaa dayactir lagu sameeyay taalladan oo hadda aad u qurux badan.
Waxaa jira xassuuso u gaar ah qaar ka mid ah halyeeyadii qaranka Soomaaliya, sida Axmed Guray, Xaawo Taako, Xalane, Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, Sheekh Xasan Barsane iyo Dr Xuseen Sheekh Kadare, kuwaasoo dhammaantood ay taallooyin ugu dhisan yihiin Muqdisho.
Taallooyinka kale ee ugu caansan Soomaaliya waxaa ka mid ah Dhagax Tuur iyo SYL. Hase yeeshee, geesiyaasii soo maray ciidanka Soomaaliya ma aha kuwo faraha lagu tirin karo, waxaana ka mid ahaa xubnihii ururkii xornimo doonka ee SYL. Sidaas awgeed, waxaa guud dhammaantood wakiil ka ah taallada Daljirka Dahsoon.
Goobtan waxay hoy u ahaan jirtay fantasyaha shacabka iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka. Maalmaha Jimacda waxaa ka muuqda bilic weyn oo waxaa lagu arkaa dad labisan oo u soo damaashaad taga halkaas, sawirrana ku gala. Xilliyada qaar waxay dhaqdhaqaaqyadaas soo jiitaan indhaha dalxiiseyaasha, iyagoo fursad u hela in ay milicsadaan quruxda dhaqanka Soomaalida iyo labiskoodaba.
Taallada Daljirka Dahsoon. Taallada ayaa loo dhisay si loo maamuuso raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee ku dhintay difaaca Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa astaan muhiim ah oo ku taal magaalada Muqdisho. Waxay ku dhowdahay hudheelka Naaso Hablood.
Bishii Abriil ee sanadkii lasoo dhaafay, 2020-kii waxaa Daljirka Dahsoon ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay shacabka uga soo horjeedeen falal dil ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Marka la gaaro 1-da bisha luulyo, oo ku beegan xornimada Soomaaliya, waxaa ka dhaca munaasabado loogu dabaaldagayo xusuustaas, madaxda waddankana waxay dhigaan ubax lagu sharfayo halyeeyada ay astaanta u tahay taalladan. Xitaa inta badan khudbadaha guddoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu shacabka ugu jeediyaa fagaaraha Daljirka Dahsoon.
Soomaaliya gaar kuma aha Daljirka Dahsoon.Soomaaliya oo kaliya ma aha dalalka dhisay Taallada Daljirka Dahsoon, balse waxaa jira waddamo kale oo sidaasoo kale u maamuusay halyeeyadooda aan la garaneynin.
Magaalooyinka caalamka ee Taallada Daljirka Dahsoon ay ku taallo waxaa ka mid ah Moscow, oo ah caasimadda dalka Ruushka iyo magaalo madaxda waddanka Talyaaniga ee Rome. Intaas kaliya ma ahane, dalal kale oo aad u badan ayey ku dhisan tahay taallada Daljirka Dahsoon, oo ujeedadeeduna ay la mid tahay tan Muqdisho ku taalla.